Far out - Part 3
…र, यसरी अन्त्य भयो स्पेनको ‘महान’ पुस्ता
नेप्लेज, १८ असार । लुज्निकी स्टेडियममा रसियाविरुद्धको प्रिक्वार्टर फाइनल खेल सुरु हुनअघि सबै जना आश्चर्यमा परे । किनभने सन् २०१० को ‘महान’ स्पेन टिमका एक जना सदस्य पहिलो एघारमा अटाएनन् । नौवटा मुख्य प्रतियोगितामा एक खेलमात्र नखेलेका…
रसियाले तुहायो स्पेनका ४ खेलाडीको सुखद विदाईको सपना
कुनैपनि खेलाडीलाई आफ्नो करियरको विदाई सुखद रुपमा होस भन्ने चाहना हुन्छ । यस्तैमा स्पेनका भेट्रान खेलाडी आन्द्रिय इनिस्टा, जेरार्ड पिकेले पनि यो विश्वकपमा राम्रो प्रदर्शन गरेर उपाधि उचाल्ने लक्ष्यका साथ रसिया पुगेका थिए । तर नतिजा उल्टो…
मेस्सी र अर्जेन्टिनाको युग सकिएकै हो त ?
नेप्लेज, १७ असार । शनिबार विश्वकपको अविष्मरणीय प्रिक्वार्टरफाइनल खेलको अन्तिम सिठ्ठी बज्यो, अर्जेन्टिनाका लियोनल मेस्सी र फ्रान्सका केलिन एमबाप्पेले अंकमाल गरे । यो दृश्यले के एक खेलाडीबाट अर्को खेलाडीको महानता प्रेरित गरेको थियो ।…
विश्वकप समूह चरणकाे नालिबेली
नेप्लेज, १५ असार । फिफा विश्वकपको समूह चरणका खेलहरु सकिएका छन् । समूह चरणमा धेरै अप्रत्यासित नतिजाहरु आएका थिए । डिफेन्डिङ च्याम्पियन जर्मनीले मेक्सिको र दक्षिण कोरियासँग हार ब्यहोर्दै समूह चरण घर पठाउनु, अर्जेन्टिना आइसल्याण्डसँग बराबरीमा…
रसिया विश्वकपको समुह चरण ‘क्वान्टिटी भन्दा क्वालिटी’ बढी
नेप्लेज,१५ असार । रुस विश्वकपमा समुह चरणका खेलहरु सकिएका छन । १५ दिनसम्मभएका ४८ खेलबाट विश्वकपले नकआउट चरण खेल्ने १६ टिम पाएको छभने १६ टिमको यात्रा समुह चरणमा नै रोकियो । समुह चरणमा नै विश्वकप रोमान्ञ्चक, नाटकीय र प्रतिस्पर्धात्मक बने ।…
खेलका दाैरान पनि रोनाल्डोका साथमा हुन्छन् छोरा र प्रेमिका !
नेप्लेज, १५ असार । पोर्चुगल टिमका कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोले आफ्नो परिवारको फोटोलाई खेलका दौरान पनि बोकेर हिँड्छन् भन्दा अनौठो लाग्न सक्छ । तर, तपाईहरु सहि पढिरहनु भएको छ । रोनाल्डोको आफ्नो कम्पनी सिआर-७ ले उत्पादन गरेको फुटबल…
स्वीट्जरल्याण्डमा हुर्किएका राकिटिच कसरी पुगे क्रोएशियाली टिममा ?
नेप्लेज, १४ असार । स्पेनमा बसेर बार्सिलोनाका लागि फुटबल खेल्ने क्रोएशियाली मिडफिल्डर इभान राकिचिट स्वीट्जरल्याण्डमा जन्मिएका, हुर्किएका हुन् । क्रोएशियाको राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्नुअघि उनले स्वीट्जरल्याण्डबाट उमेर समूहको फुटबल खेलेका थिए ।…
मेक्सिकोसँगको हारपछि राष्ट्रपतिको अगाडि नै रोए मुन
फिफा विश्वकपको समुह चरणका दुबै खेलमा हार ब्यहोरेर बाहिरीने लगभग पक्का भएको दक्षिण कोरीयाका स्टार खेलाडी सन हिङ मुन राष्ट्रपति मुन जेइ इन अगाडी रोएका छन् । दक्षिण कोरीया र मेक्सिकोको खेल हेर्न रसिया पुगेका राष्ट्रपति मुन जेइ इन खेल…
‘भार’को विश्वसनीयता ९८.९ प्रतिशत
नेप्लेज, १० असार । जारी विश्वकपमा पहिलो पटक भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्री (भार) प्रणालीको प्रयोग गरिएको छ । रेफ्रीको मानवीय त्रुटी कम गर्न ल्याइएको यो प्रविधिको आलोचना पनि नभएको होइन । तर, दुई वर्षसम्म परीक्षाणको रुपमा प्रयोग गरी अन्ततः…
सेनेगल विरुद्द हारेपछि श्रीमतीको अङ्गालोमा पुगेका लेवान्दोस्की
नेप्लेज, १० असार । सेनेगल विरुद्धको खेलमा दुई एकले पराजित हुँदा राम्रो खेल्न नसकेका स्टार खेलाडी रोबर्ट लेवान्दोस्की आज हुने कोलम्बिया विरुद्धको खेलमा पनि निकै दबावमा रहनेछन । ब्यक्तिगत हिसावले जति राम्रो खेलाडी भएपछि सेनेगलसँग टिम दुई…